Phupha ngePedal Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-pedal sisixhobo esisebenza ngeenyawo kwizixhobo ezifana noomatshini bokuthunga okanye iivili zobumba okanye kwizithuthi. Ngamaxesha athile, amandla Isihlunu sisetyenziselwa ukuqhuba, ngamanye amaxesha sisetyenziselwa ukulawula isantya seinjini. Kwiimoto kunye neebhayisikile ezininzi, i-pedal isetyenziselwa ukukhawulezisa kunye nokuqhekeza. Ukufezekisa injongo, uhlala unyanzelwa ukuba ukhawuleze, ngokoqobo nangokomfuziselo.
Inyawo ephupheni mhlawumbi linenjongo ethile. Nokuba liphupha lifuna ukusuka endaweni okanye lifuna ukuyeka. Ke ngoko, unxibelelwano lubalulekile ekutolikeni amaphupha. Ukuphupha kufuna ukufezekisa ntoni?
1 Uphawu lwephupha «uPedal» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uPedal» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uPedal» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uPedal» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha «enyovwayo» sisikweko sempumelelo yenkampani. Ukuphupha kufuna ukuya phambili ebomini kwaye akoyiki mntu umzamo umva. Ukutolikwa kwephupha, nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ngaba umntu uvela nyhani kwindawo yephupha elo.
Ukuba iphupha alihambi, nangona bezama kakhulu, i-pedal luphawu lokulala kubo. ngamampunge lawo yemizamo. Umphuphi kufuneka athathele ingqalelo ukuba mhlawumbi akawuthathanga na umsebenzi. Kwinguqulelo edumileyo yamaphupha, umqondiso wokunyohlwayo njengophawu lokuphupha umhlobo efuna inkxaso.
Kuphando lwamaphupha, i-pedal yebhayisikile ngumqondiso wokuzimisela ukuzimela. Ukuphupha kunethemba kunye nokuqiniseka kokuqhubela phambili ngokwakho.
Ukuba uphawu lwephupha luvela ngokunxulumene nemoto, ibonisa umnqweno kunye nokukwazi ukwenza izigqibo ngokuzimeleyo. Ngokubanzi, i-pedal yesithuthi ekuchazeni amaphupha ibonisa ukukhula okuhle.
Ukuba ukuphula iziqhoboshi ngephedali, umfanekiso wephupha unokuba sisikhumbuzo sokuphepha ukungxama kunye Ukungaqondi Qaphela. Nangona kunjalo, ukuba umntu unika igesi ephupheni, umntu ophuphayo kufuneka azibuze ukuba woyika ukuphulukana nantoni xa ehamba kancinci kancinci.
Isimboli yephupha «enyovwayo» inokuqondwa nakutoliko lwamaphupha njengesicelo sokucothisa.
Uphawu lwephupha «uPedal» - Ukutolikwa kwengqondo
Ngokwamagama engqondo, uphawu lwephupha "isiseko" kutoliko lwephupha lubonisa iinjongo zephupha kunye nokuzimisela kwakho ukusebenzisa onke amandla akho ekuwazalisekiseni. Kuba ukuphupha kokwakho Carrera kubaluleke kakhulu, ngakumbi ukunyuka kufuneka kwenziwe ngokukhawuleza.
Ukuba unyusa isantya kunye nephedali ephupheni, oku, kwelinye icala, luphawu lwethemba kuphando lwamaphupha. Kwelinye icala, uhambo lusenokukhawuleza kakhulu. Ke kukho ukungazi nto kwisimboli yephupha. Yintlungu iyabonakala. Mhlawumbi ukuphupha kukubeka nawe phantsi koxinzelelo. Ke ngoko, ukuqonda kokulala kubalulekile ukumisela ukuba iphupha eli liyakhawulezisa okanye liyayeka ngenyawo. Zombini, ekuchazeni amaphupha, kukubonakalisa isidingo solawulo.
Uphawu lwephupha «uPedal» - ukutolika kokomoya
Inyozo luphawu lokuchazwa kwamaphupha okomoya. umsebenzi wengqondo namandla. Isimboli yephupha ibeka umbuzo embindini, liphi injongo iphupha kwaye liyokuhamba kangakanani kunye namandla alo omoya asendleleni.